अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब, कस्ता पाउनेछन् सुविधा ? « Drishti News – Nepalese News Portal
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब, कस्ता पाउनेछन् सुविधा ?
७ माघ २०७७, बुधबार 10:32 am
अमेरिका – अमेरिकाको ४६औं राष्ट्रपतिका रूपमा ७८ वर्षीय जो बाइडेनले शपथ ग्रहण गर्दैछन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पद मानिन्छ ।
विश्व चर्चाको रुपमा हेरिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदबारे धेरैलाई चासो हुनसक्छ । साधारण सरकारी कर्मचारीजस्तै संघीय कानून अनुसार यो पदका पनि आफ्नै मर्यादा र सीमा निश्चित गरिएका हुन्छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको तलब र उनका अन्य खर्च पूर्ण रुपमा कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । २० जनवरीमा शपथ ग्रहण गरेपछि जो बाइडेन अमेरिकाका ४६ औं राष्ट्रपति बन्नेछन् । एक राष्ट्रपतिको रुपमा उनको कति तलब हुन्छ र उनले कस्ता प्रकारको सुविधा पाउनेछन् यसबारे केहि जानकारी गरिएको छ ।
अमेरिकी कानून (US Code 3) अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिको वार्षिक तलब चार लाख अमेरिकी डलर रहेको न्यूयोर्कको वेबसाइट स्टाइ कास्टरले उल्लेख गरेको छ । नेपाली मुद्राका अनुसार यो ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ हो । यसका साथै राष्ट्रपतिले ५० हजार डलरको वार्षिक महँगी भत्ता पनि पाउँछन् । यसबाहेक दुई लाख डलरको भ्रमण भत्ता पनि पाउने जनाईएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले यसबाहेक वाषिर्क रुपमा मनोरञ्जनका लागि पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यो रकम १९ हजार लडर हुन्छ जसलाई उनीहले आफ्ना लागि र आफ्नो परिवारका लागि खर्च गर्न सक्छन् । यस्तै फर्स्ट लेडी अर्थात् राष्ट्रपतिकी श्रीमतीका लागि कुनै तलब तोकिदैन ।
अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपतिमा सन् १७८९ मा जर्ज वासिङ्टन बनेका थिए । त्यसपछि पाँच पटक तलब वृद्धि भएको हो । पछिल्लो पटक सन् २००१ मा तलब २ लाखबाट चार लाख अमेरिकी डलरसम्म तलब वृद्धि भएको हो । राष्ट्रपतिका लागि तलब निश्चित भएपनि यो पदमा आसिन सबै राष्ट्रपतिले तलब स्विकार गरेका छैनन् । पोलिटिको अमेरिकन पोलिटिकल जर्नलिजम कम्पनीका अनुसार अमेरिकाका ३१ औं राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर सन् १९१७ मा छानिएपछि आफ्नो तलब अस्विकार गर्ने पहिलो राष्ट्रपति रहेको उल्लेख छ । उनले आफ्नो तलब दानमा दिएका थिए ।
स्मरण रहोस्, तलबका साथै राष्ट्रपतिले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा अन्य थुप्रै भत्ता पनि पाउने गर्छन् । यसबाहेक उनलाई लिमोसिन, मरिन वन र एयर फोर्स वनको सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ । यसबाहेक राष्ट्रपतिले ह्वाइट हाउसमा निःशुल्क आवास प्राप्त गर्छन् । यस्ते कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति सरकारी खर्चमा रहन्छन् जसमा लगभग २ लाख डलरको वार्षिक पेन्सन, स्वास्थ्य सेवा, भुक्तानी गरिएको आधिकारिक यात्रा र एक कार्यालय पनि समावेश हुने बिजनेस इन्साइडरमा उल्लेख छ ।